Mareykanka oo xayiraad dal ku gal ku soo rogayo saraakil ka tirsan xisbiga shuuciga ee Shiinaha… – Hagaag.com
Mareykanka oo xayiraad dal ku gal ku soo rogayo saraakil ka tirsan xisbiga shuuciga ee Shiinaha…
Posted on 27 Juunyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Pompeo ayaa sheegay in xayiraaddan ay bartilmaamedsaneyso saraakiil hadda kamid ah xisbiga iyo kuwo horay xisbiga uga tirsanaaba.
Labo isbuuc ka hor ayay ahayd markii, Hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam, ay sheegtay waddamada shisheeye “inuu boos uga bannaaneen” iney soo farageliyaan sharciga ammaanka uu Shiinaha qorsheynayo ee khuseeya arrimaha ammaanka gudaha dalka Shiinaha.
Balse Ms Lam oo marki ugu horreeysay meel fagaara ah ka hadashay waxay sheegtay tallabbada sharcigaasi lagu meel marinayo iney tahay tallaabbo “xilkasnimo ah” oo lagu dhowrayo dadka ugu badan ee sharciga u hoggaansamo.
Waxayna gaashaanka u daruurtay inuu sharcigaasi uu laalayo xuquuqda shacabka Hong Kong.
Xuquuqaha ay shacabku leeyihiin waxaa si cad looga qeexay dastuur hoosaadka Hong Kong, lana dhaqan geliyey laga billaabo marki maamulka Hong Kong uu Ingiriiska ku wareejiyey Shiinaha 1997-kii. Sharciga aasaasiga ahna wuxuu shacabka Hong Kong uu u oggolaanayaa, xorriyadda mudaharaadka, oo aan ka jirin dal weynaha Shiinaha.
Arrintan ayaa horseday in dabayaaqadi toddobaadki hore, in waddooyinka Hong Kong ku soo laabtan mudaharaadyo hor leh oo ay ugu dambeysay sanadki hore, booliskuna si ay dadka mudaharaadayaasha u kala eryaan ay adeegsadeen sunta indhaha ka ilmeysiisay.
Safaraada shiinaha ee Maraykanka ayaa sheegtay inay kasoo horjeddo go’anka xukumadda Washington ay kula safaneyso go’aanada khaldan
Qoraal lagu soo daabacay barta Twitter-ka, safaaradda ayaa intaas raacisay: “Waxaan ka codsanaynaa kooxda Mareykanka inay si deg deg ah u saxaan khaladaadkooda, ay ka noqdaan go’aanka oo ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan arrimaha gudaha Shiinaha.”
Khubarada u dhuun daloola siyaasadda Shiinaha ayaa cabsi ka muujiyey sharcigan cusub in lagu ciqaabi doono cid kasta oo xukumadda Beijing wax ka sheegto, si la mid ah waxa ka dhaca dal weynaha Shiinaha.